स्थानान्तरण मूल्य के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki जारी मूल्य
स्थानान्तरण मूल्य के हो?
der जारी मूल्य मुख्यतया पट्टि लेनदेनसँग सम्बन्धित छ। अवशिष्ट मूल्य जुन अवधिको अन्त्यमा पट्टे भएका सम्पत्तिहरू यहाँ स्थानान्तरण मानको रूपमा नामित गरिएको छ। अवशिष्ट मान मूल्य हो जसले कमी ले पट्टिको अवधिको अन्त्यमा पट्टि वस्तुमा लिन सक्छ। अवशिष्ट मूल्यको मूल्य पहिले नै अनुबंधको अन्त्यको समयमा र पट्टे अनुबंधमा रेकर्ड गरिएको परिभाषित गरिएको छ। पट्टिको अवधिमा, तथापि, धेरै परिस्थितिले पट्टे वस्तुको मूल्य घटाउन सक्छ र यसरी कमीको हानि हुन सक्छ। शब्दको अन्तमा, कमिटिले पट्टेको वस्तु प्रतिस्थापन वा अन्य व्यक्तिलाई बेच्न पनि विकल्प दिन्छ।
यद्यपि, स्थानान्तरण मूल्यसँग ऋणको क्षेत्रमा अर्थ छ।
भुक्तानी उधार व्यापारमा बचत गरिएको छ
रिलीज मूल्य पनि क्रेडिट घाटा लागि एक शब्द यहाँ अलि फरक अर्थ छ, तर र ऋण को परिशोधन वा ऋण पुनर्गठन भूमिका खेल्छ। क्रेडिट परिशोधन एक वा धेरै उधारकर्ताओं देखि एक वा बढी ऋण एक ठूलो ऋण मा संयुक्त हुन सक्छ।
तसर्थ, उधारकर्ताओं रूपमा यो केही मुख्य लाभ प्रदान गर्दछ, एक ऋण समेकन वा क्रेडिट परिशोधन लागि रोज्नुहोस्। राम्रो सिंहावलोकन लागि वित्तीय स्थिति मा प्रस्ताव गरिएको छ र चासो accruing मासिक लाभ को मात्रा कम र पनि installment भुक्तानी रकम कम किनभने अन्य मा ऋण परिशोधन को लागत कम गरिनेछ। अधिकांश अवस्थामा, छुट अवधिको अवधि पनि छोटो छ। स्थानान्तरण ठाउँ लिन अघि, उधारकर्ता को ऋणदाता गर्न आवेदन पेश गर्नुपर्छ। वार्तालापको क्रममा, स्थानान्तरण मूल्य अब वार्तालाप गरिएको छ।
स्थानान्तरण मान एक गणितीय मात्रा हो र संकेत गर्दछ कि एक निश्चित समयमा अनुबंध अवधि को समयमा अझै पनि लायक छ। डिस्चार्ज योगमा धेरै चीजहरू हुन्छन्। यसमा वर्तमान अवशिष्ट ऋण साथै साथ ब्याज को इच्छित मिति द्वारा खर्च हुनेछ। यद्यपि, प्रसोधन शुल्कमा सम्भावित प्रसोधन शुल्कहरू साथै हालको उधारकर्ता द्वारा खर्च गरेको प्रबन्धन शुल्क पनि समावेश हुन सक्छ। केहि क्रेडिट मध्यवर्तीहरु लाई पनि पुरानो भुक्तान गर्न आवश्यक पर्दछ। यो ऋण धेरै क्रेडिट दलालहरु संग हो जब एक ऋण पहिले नै समाप्त हुन्छ। अनुमानित स्थानान्तरण मूल्य बैंक द्वारा भुक्तानी गरिन्छ जसले ऋण वा ऋण स्वीकार गर्दछ। संपार्श्विक बिना, क्रेडिट रिजोल्युसन छिटो छ, असंगत र अपरुक्रमिक।
संपार्श्विक पनि संपार्श्विकको लागि विचार गरिनुपर्दछ। यहाँ उधारकर्ता को सहमत अवधि भित्र आर्जित ब्याज संग ऋण चुक्ता गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न सम्पत्ति छ। धेरै उधारदाताओं तिनीहरूले जोखिमपूर्ण रूपमा ऋण को पुरस्कार हेर्न गर्दा त जमानत माग वा डर छ भने यदि यो ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन भनेर अपर्याप्त उधारकर्ताओं क्रेडिट छ। जमानत संग क्रेडिट परिशोधन थप समय आवश्यक र एक बांध्नु रूपमा unbureaucratic जाने छैन। सुरक्षाको लागि ऋणदाता detaching कार्य तर पनि मूल creditor लिनुपर्छ को मात्र। नयाँ उधारकर्ताओं अवस्थित ऋण प्रतिस्थापन र पुरानो उधारकर्ताओं गरेको जमानत प्राप्त हुनेछ। पुरानो ऋणदाता यसलाई पूर्णतया बैंक detaching गर्न जमानत स्थान्तरण गरिएको छ भने मात्र जारी मूल्य हुन्छ। जमानत को स्थानान्तरण सम्भव छैन छ, पुरानो ऋणदाता रिलीज मूल्य र ऋण को छुटकारा एक विफलता मानिन्छ प्राप्त गर्दैन।
अघिल्लो लेखव्यावसायिक ड्रिल